တောင်ကုတ်မှ ရခိုင်များကို အလွန်မုန်းတီးကြောင်း ဇာဂနာ ပြောဆို ~ Myanmar Express
ရိုဟင်ဂျာ (၁၀) ဦး ကို သတ်ဖြတ်သည့် တောင်ကုတ်မှ ရခိုင် များကို အလွန်းမုန်းတီးကြောင်း ပြည်သူချစ်တဲ့ လူရွှင်တော် ဦးဇာဂနာက ဂါဒီယန်း သတင်းစာကို ပြောလိုက်တယ်၊၊ ဒါ့အပြင် အင်တာနက် သုံးသူ မြန်မာ များကိုလည်း လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုပြီး အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ကုလား - ရခိုင် အဓိကရုဏ်း ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူအများထံမှ မကျေမနပ် ပေါက်ကွဲသံများ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်များကတောင် ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ်လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ကတော့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတစ်ခွန်းမှ ဝင်ပြောတာမျိုး လုံးဝ မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်များ အကူညီလိုအပ်ပြီး မှီခိုအားထားရာ မဲ့နေချိန်မှာလည်း ဇာဂနာ က ရခိုင်ဒေသ ကို သွားရောက်ကူညီအားပေးတာမျိုး မရှိတဲ့အပြင် ပြင်သစ်နဲ့ ဥရောပ ကို လျှောက်သွားပျော်ပါးနေပါတယ်။တောင်ကုတ်မှ ရခိုင်များကို မုန်းတယ် ဆိုတဲ့ ဇာဂနာရဲ့ ပြောဆိုချက် အပြည့်အစုံကိုတော့ http://m.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/17/test-new-burma-ethnic-violence?cat=commentisfree&type=article မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Express
18 June 2012 19:45
18 June 2012 20:00
ငါလိုးမသား..မအေလိုးရိုဟင်ဂျာ ဇာကနာ.. မြန်မာရခိုင်ဘက်ကလိုက်မယ် စိတ်မကူးဘူး..သု.အမျိုးရိုဟင်ဂျာဘက်ကလိုက်ချင်တာ လီးပဲ..ရိုလင်ဂျာ စောက်ပတ်စား ဇာကနာ......
တောင်ကုတ်သားတွေက မင်းအမေကို ကုလားတွေ လိုးသလို မလိုးပေးကြလို့လားး မင်းက တောင်ကုတ်သားတွေကို စော်ကားလှချည်လားး.. ရချုင်သူနေရာမှာ မင်းမိန်းမ ဖြစ်ပီး ကုလားလိုးလို့ သေသွားခဲံရင် မင်း ဒီလိုပြောနိုင်ပါ့ မလားး ခွေးလိုးမသား ဂတုံးးးး
18 June 2012 20:37
အ စ ထဲ က အဲ ဒီ ကတုံး ကို ကြည့် မ ရ ဘူးအ လ ကား ကောင် ကိုယ့် ကိုယ် ကို သ်ပ် ထင် နေ တဲ့ သောက် သုံး မ ကျ တဲ့ ကောင်
သူ သမီးသာ အဲလိုမျိုးဖြစ်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ မေးကြည့်ပါအုန်းဗျာ
လိးပဲပေါ့ ဇဂနာ လိးပဲပေါ့ မင်းမေမင်းလိုးလိုက်
ဘင်္ဂလီ က နိုင်ငံသားမှ မဟုတ်တာ။ ဇာဂနာ က မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဓ ဘာသာ အချင်းချင်းဖြစ်သလို ရောချသွားတယ်။ ဒီကောင်လည်း လွဏ်းဆွေပဲ
18 June 2012 22:51
18 June 2012 22:53
ငါ လိုး မ ဂ တုံး
ငါလိုးမ ဂ တုံး
Hate him more than ever.....shame on u zarganar
18 June 2012 23:15
ဇာ ဂနာ အာ ပ လာ
Rakhine people and Myanmar people togather Boycott and protest Zaganar.
19 June 2012 02:33
I think zaganar isapolitician but now what i know is he is just an opportunist with withabig fucking mouth. If he goes like this again and again he will be inafucking bloody ditch soon.
19 June 2012 07:49
သူက ဘာသာပြောင်းဖို့ ဆိုပီး တရားဝင် ပြောထားတာလေ.. အခုလဲ မွတ်ဆလင် ဘက်က ကာပြောပေးတယ် ဆိုတော့ ဘာသာတောင် မွတ်ဆလင် ဖြစ်နေလောက်ပီး .. အေကွာ.. ဘာကြောင့် ဘာသာပြောင်း ချင်၇တာလဲ ဆိုတာကို ငါနားလယ်ထားတာက မွတ်ဆလင် ဘာသာက အမေကို လိုး လို့၇တယ်. သမီးကို ပြန်လိုးလို့ ၇တယ်.. တူမကို လိုးလို့ ရတယ်.. အဲ့တာတွေကြောင့် ဂတုံး ဇာဂနာ မွတ်ဆလင် ဇါတ်ထဲ ၀င်တာလို့ ထင်ပါတယ်.. အကြံ ပတ်စက်လိုက်တာ ကွာ.. အမေ နဲ့ သမီး တူမ ကိုပါလိုးချင်လို့တဲ့ ဗျာ. ကြားလို့မှ့ မတော်.. ဂတုံးရယ် . အဲ့လောက်ဖြစ်နေရင်လဲ ဖာသည်မ အိမ် သွားလေ ဗျာ..
Fack you zarganar.You are not our nationality.
19 June 2012 11:57
နာလိုးမသား ဇာဂနာ ကုလားဖင် ခံထားလို့လား မင်းမေလိုးကုလား ဘက်လိုက်ရအောင် ငါကမြန်မာ ရခိုင်ထိရင် မခံဘူးကွ မြန်မာချင်းချင်း မကူဘဲ ခွေးကုလားဘက်လိုက်ရတယ်လို့ ကုလားလီး တစ်ငုံချင်းသွားစုတ် အိမ်ပြန်ရင်မအေတက်လိုး မဝသေးရင်သမီးလိုး ပြီးရင်ခွေးအလ္လာကို ဖင်သွားခံ ကဲညီကိုတို့ ဒီငနဲကိုတွေ့တဲ့နေ ရာ တွေ့ရာသချိုင်းဓားမဆိုင်းပဲဟေ့
19 June 2012 12:58
ဇာဂနာဆိုတဲ့ကောင် အပြောဆိုမဆင်ခြင်လို့ ဒုက္ခရောက်အုံးမယ်။ ထောင်ထဲမှာအရိုက်ခံရလို့ သွားတွေကျိုးကုန်တာ မမှတ်သေးဘူး။ ထောင်ထဲမှာသေသွားခဲ့ရင်တောင် ပိုကောင်းအုံးမယ် ဒီဘဲတော့ လီးပဲ။
19 June 2012 14:29
ခွေးသခိုး ကတုံး ကြည့်လို့ကို မရဘူး ကျတ်သရေတုံးကောင်...
19 June 2012 14:30
ဒီလိုကောင်တွေက သေသွားလဲ တိုင်းပြည် ဘာမှ့ မနစ်မွန်းဘူးး ၇ှိနေရင်သာ တိုင်းပြည် မအေးချမ်းတာ...
ဗမာမှန်ရင် ဗမာ့သွေးတော့ ရှိပါကိုယ်နေတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဆိုတာတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်
ဇာဂနာ ရေနင့်မယား သမီး သာ အစော်ကား ခံရ ရင် နင်ဒီလို စကားမျိုးပြောမှာမ ဟုတ်ဘူး ကိုယ့် လူမျိုးဘက် မှာနေပါ နင့်ပထွေး ဘက် မှာ မနေ နဲ့
19 June 2012 20:02
သေချင်းဆိုး ကြီး အမျိူးယုတ်ကြီး
20 June 2012 04:47
ဇဂနာ သူတော်စား အမေရိကားလာပြီးအပိုင်းအစရုပ်ရှင်တွေပြပြီးတောင်စားသွားတယ်
တဂယ်ဆို ထောင်ထမြှာတင် အသေသတ်လိုက်၇မှာ... သေမထူး နေမထူးတဲ့ ကောင်တွေ .. နိုင်ငံ ဆုတ်ယုတ်ဖို့ အတွက်သာ လုပ်နေတဲ့ ကောင်.. သူ့ သမီး ငါလိုးမသား ကောင်..
သတင်းတိုင်မှာမှန်ကန်မှု့ တွေပြည့် စုံကြပါစေ
22 June 2012 11:29
you guys too much. enough is enough.
22 June 2012 19:12
23 June 2012 16:38
23 June 2012 23:14
ရိုဟင်ဂျာ ကုလား လမွှေးနှုတ်တဲ့ ဇာဂနာ ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကြိုက်တယ်ကွာ... (ချီးကတုံး ဇာကနာ)
29 June 2012 03:27
ခင်ဗျားကိုအထင်ကြီးခဲ့တာအလားကားပဲခင်ဗျားလောက်အမြော်အမြင်နည်းတဲ့သူ ကို ဘာလို့ များခေါ်င်းဆောင်တင်ချင်ကျတာလည်း မသိဘူးနော် အေးလေ နည်းလို့လည်းထောင်ထဲမှာတော်တော်နေခဲ့ရတာ သူများတွေက တစ်ကယ်ထည့်ပြောပြီးတစ်ကယ်နေတာ ခင်ဗျားကျတော့ တစ်ကယ်ထည့်လည်းမပြောရဲပဲနဲ့ထောင်ထဲမှာနေရတာ မစမ်းပါဘူး
စောက်ရုး ကောင် မင်းပထွေးဖက်ကနာမနေနဲ့
7 December 2012 19:48
ဇာဂနာ was right
7 December 2012 19:51
that ten man are not rohinjya the are myanmar muslimok min do IQ is very low
7 December 2012 19:58
ဗမာ and ရခိုင် are differentရခိုင် are terrioseဇွန်လအတွင်းမှာ ၇၈ ယောက်သေဆုံးတယ်လို့မြန်မာအစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်တာက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသတ်ဖြတ်ခံ ရတဲ့နေရာတွေထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်နေရာက သတင်းဘဲဖြစ်တယ်
7 December 2012 20:01
စစ်တပ်၊ နစက၊ လုံထိန်းတွေက ပစ်သတ်လို့သေခဲ့ရတဲ့ ၃၅ ယောက် (ကလေး ၂၅ ယောက်) ကိုမြှပ်ထားတဲ့နေရာ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူ ၁၀၀ ကျော်ရဲ့အလောင်းတွေကို ကုန်တင်ကားနဲ့သယ်သွားတာကိုမျက်စိနဲ့ကိုယ် တိုင်မြင်ခဲ့ရတဲ့မျက်မြင်သက်သေ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲကို ဓါတ်ဆီပုလင်းနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီး မီးရှို့တဲ့ အကြောင်း ဘာသာရေးပညာရှင် ၄၀ ကိုဗလီထဲကိုခေါ်ပြီး အားလုံးကိုသတ်ပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်း အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို မောင်နှမ၀မ်းကွဲ ၅ ယောက်ရှေ့မှာ ရဲတွေက မီးပုံကြီးထဲကို မီးရှို့သတ်တဲ့အကြောင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးပြီး သေတဲ့အထိညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်း၊ ရဲစန်းမှာအလောင်း ၆ လောင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို စစ်သား၊ လုံထိန်း၊ နစက အယောက် (၂၀) ယောက်က၀ိုင်းပြီး မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အကြောင်း၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစပြီး ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို လူမျိုးတုန်းသုတ်သင်ဖို့ ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေစီစဉ်ခဲ့တာ
စောက် မွတ် စ လင် ကု လား တွေဆွန် နီ နဲ့ ရှီ ရိုက် မ တူ တာ နဲ့ တောင် အ ချင်း ချင်း သတ် နေ တဲ့ အ ကောင် တွေ ။ မင်း တို့ ကို အ မေ ရိ ကန် က plan ချ ပြီး မျိုး တုန်း သုတ် သင် ဖို့ လုပ် နေ ပြီ။ မွတ် စ လင် တွေ အ ကုန် သေ မှ လော က ကြီး အေး မယ်။
No. We are the same. We (Bamar) feel angry because of Muslim.
16 December 2012 01:20
၉၆၉ က အသုံးချဖို့ ကြိုးစားတာကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ငြင်းပယ်ရပါတဲ့ ဆိုတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ VOA နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အပေါ် ရိုင်းပြခဲ့သည့် အတာ ဆိုသူ နှင့် မွေးစားသား တို့ဇတ်လမ်းအား ဖွင့်ချခြင်း (ဓာတ်ပုံ - ၁၂ ပုံ)
NLD - ပါတီကုလား... အိပ်ပျော်သွားပြီလား
From : ..http://myanmarheadline.blogspot.com/2013/05/nld_26.html
၈၈- ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံနှင့်အတူ မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ NLD။ ၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင် ...
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်နှင့် ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
*အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်*
၁။ ဤဥပဒေကို လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က...
နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ(၂၆)ရက်နေ့ နေ့လည်(၂း၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ယနေ့နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီအချိန်ထိ မိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်အကျဉ်းချုပ်။ လွန်ခဲ့သော (၂၄)နာရီအတွင်းက ဧရာဝတီတိုင်...
ယာဉ် စည်း ကမ်း ဖောက် ဖျက် မှု များ တရား ရုံး ဒဏ်ငွေ အပြင် အ ထူး ဒဏ်ငွေ ပါ ပေးဆောင် ရ မည်
ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ယာဉ်အန္တရာယ် လျော့ပါးရေးအတွက် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သော ယာဉ်များကို တရားရုံးဒဏ်ငွေအပြင် အထူးဒဏ်ငွေကို ပေ...
မြောက်ဦးမြို့နယ် သျှစ်သောင်း ထုက္ကန့်သိမ် အံတော်သိမ် ဘုရားများ ဗုဒ္ဓ ပူဇနိယ ပွဲတော် ကျင်းပ
မြောက်ဦး မေ ၂၆ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ် ညောင်ပင်ဈေး ရပ်ကွက်ရှိ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် သျှစ်သောင်း၊ ထုက္ကန့်သိမ်၊ အံတော်သိမ် ဘုရားများ၏ (၈၅)ကြိမ်...
ပတိနာ ဇနိတော ဘောဂံ၊
ပုရိသော ဟိ ပဓာနောဝ၊
ဣတ္ထိ သူစိ သုတ္ထံယထာ။
လင်ဖြစ်သူကသာလျှင် စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေနိုင်၏။
မယားသည်ကား လင်ရှာဖွေထားသည့် စီးပွာ...
ဂျပန် အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ၏ နျူကလီးယား ဓာတ်ခွဲခန်း တစ်ခုမှ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ပစ္စည်းများ ယိုစိမ့်
[image: ဂျပန် အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ၏ နျူကလီးယား ဓာတ်ခွဲခန်း တစ်ခုမှ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ပစ္စည်းများ ယိုစိမ့်] တိုကျို မေ ၂၅
ဂျပန်နိုင်ငံ အီဘာရာကီ စီရင်စ...
အခြေခံပညာ အဋ္ဌမတန်းအောင်မြင်သူများ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများ တက်ရောက်နိုင်
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန အစိုးရနည်းပာာအထက်တန်းကျောင်းများကို ယခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့် လှစ် မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သင်တန်းကို(၂၀၁၃)ခုနှစ် အခြေခံပညာအဋ္ဌမတန်း...
ရတနာပုံုံ ဆိုက်ဘာ စီးတီတွင် တက်ရောက်နေသော ရခိုင်မှ ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား တစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံး
ပြင်ဦးလွှင်မြို့ ရတနာပုံုံ ဆိုက်ဘာ စီးတီတွင် တက်ရောက် သင်ကြားနေသော ရခိုင်မှ ကျောင်းသား တစ်ဦး သည် နောင်ချို အင်ဝိုင်း ရေတံခွန်တွင် ယမန်နေ့က ရေနစ် သေဆုံးသွာ...
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကျဆုံးခြင်း (သို့) UWSA ဝ စစ်တပ် ပေါ်ပေါက်လာပုံ
ဘိုးဘိုးအောင် ဖန်ဆင်းတဲ့ ဝ လား...... (၃) ============================
ပဲခူးရိုးမမှ လွင့်စင်သွားခဲ့သော မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ခ) ဗကပဟာ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင...
၈၈- ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံနှင့်အတူ မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ NLD။ ၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင် ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD။